Inselelo entsha yokufaneleka kwabasebenzi be-Apple | Ngivela kwa-mac
Inselelo entsha yokuqina komzimba yabasebenzi be-Apple
Njengoba i-Apple ibilokhu inyusa eminyakeni yamuva nje, kusukela ngoFebhuwari ozayo, I-Apple izokwethula inselelo entsha yangaphakathi, yabo bonke labo basebenzi abafisa ukwenza inselelo ebonakalayo, onomvuzo ozoba yiqembu elikhethekile le-Apple Watch, "njengomgomo ofinyelelwe" kubo bonke abaphothula leyo mpumelelo.
Ukuze uthole lokhu kwaziwa, abasebenzi kufanele uqedele uchungechunge lwezinhloso ezibekwe yinkampani, ukuqeda izindandatho ezaziwa kakhulu ze "Umsebenzi" ngokusho komsebenzi owenziwe ngokomzimba, ngesikhathi esithile, okusazonqunywa. Ibhande lomklomelo okukhulunywa ngalo belizogcina umbala oqinile (imvamisa omnyama), futhi lizohlotshiswa ngebhande elincane kule mibala eyaziwayo ye-Apple Watch “Activity” (obomvu, oluhlaza okotshani nohlaza okwesibhakabhaka okukhanyayo).
Ibhande elisha i-Apple elizolinika labo basebenzi abafinyelela inselelo ehlongozwayo (isithombe esinikezwe yi-9to5Mac).
Ifana nenselelo yanyakenye ebizwa "Vala izindandatho", lapho i-Apple inxuse bonke abasebenzi ukuthi bagcwalise amasongo ahlongozwayo ku-Apple Watch yabo nsuku zonke, Inkampani esekwe eCupertino ifuna abasebenzi bakwa-Apple ukuthi babe yizinqaba ezihamba phambili kulo mkhiqizo, kanye nesibonelo okufanele sisilandele abanye abathengi be-apula.
Ukuqedela le nselelo, abasebenzi kumele bazuze izinselelo eziphakanyisiwe (ezingakaziwa) phakathi nenyanga kaFebhuwari, ngohlobo lomncintiswano wangaphakathi othakazelisa ngempela futhi omnandi yawo wonke amalungu amahhovisi akwa-Apple kanye ne-Apple Store.
Yinto inkampani yaseNyakatho Melika ezama ukuyifaka ngaphakathi, futhi ngokuvama okwandayo, ithuthukisa lolu hlobo lomsebenzi. Kakade ngonyaka odlule, i-Apple yaphakamisa izindlela eziningana zalolu hlobo futhi, ukubonile okubonwe, lokhu ngeke kwenze ngaphezu kokuqhubeka.
Njengoba ngivela kwa-Mac sizobheka izinselelo i-Apple ezilungiselela abasebenzi bayo kanye nempumelelo abayizuzile, kanye nezinselelo ezintsha eziphakanyiswe kuwo wonke umphakathi we-Apple.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » Inselelo entsha yokuqina komzimba yabasebenzi be-Apple
I-Apple Music for Artists, insiza yezibalo yabaculi isiyatholakala nge-beta
IDaisyDisk iyathengiswa amahora angama-24